Naya Post Nepal | रबि लामिछाने ले ढुंगा हान्न बालकोट जाउ भने’पछि जंगीए ! केपि ओली(भिडिओ हेर्नुस् )
रबि लामिछाने ले ढुंगा हान्न बालकोट जाउ भने’पछि जंगीए ! केपि ओली(भिडिओ हेर्नुस् )
रबि लामिछाने ले ढुंगा हान्न बालकोट जाउ भने’पछि जंगीए ! केपि ओली(भिडिओ हेर्नुस् ) भिडियो समाचारको अन्तमा राखिएको छ तल गएर हेर्नुस् ओलीलाई विश्व स्काउट एसिया प्रशान्त क्षेत्रको उच्च पदक ‘मेधावी योगदान’ प्रदान
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लाई विश्व स्काउट एसिया प्रशान्त क्षेत्र को उच्च पदक ‘मेधावी योग’दान’ प्रदान गरिए को छ । हिजो सम्पन्न विश्व स्काउट एसि’या प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलन’मा तत्कालीन प्रधान मन्त्री एवं नेपाल
स्काउट’का संरक्षक ओली लाई नेपाल स्काउट को अभियान वि’कास, विस्तार र प्रवर्द्धन मार्फत बाल बालिका तथा युवा हरु को सर्वपक्षीय विकास मा पुर्‍याए को योगदान को कदर गर्दै उक्त पदक प्रदान गरिए को हो ।
अध्यक्ष ओली यो पदक प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली भए को नेपाल स्काउट राष्ट्रिय समिति’का संयोजक लोक बहादुर भण्डा री ले जान’कारी दिए । ओलीले प्रधान मन्त्री हुँदा नेपाल स्का उट र यसका गति’विधि लाई विशेष चासो दिइ सरकार’का
तर्फ बाट स्काउट अभियान लाई देशै भरी विस्तार गर्न नी’तिगत तथा आर्थिक सह’योग गराएका थिए । तत्का’लीन प्रधान मन्त्री ओली ले विभिन्न स्काउट कार्य’क्रममा सह भागि’ता जना’उना का साथै ‘बाल बालिकासँग प्रधान मन्त्री’ कार्य’क्रम शुरु गरे’का थिए ।
यस्तै,। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज बाट ७१औं वर्ष मा प्रवेश गरेका छन् । दुई कार्य काल नेपाल को प्रधान मन्त्री बनेर सत्ता सम्हाले का ओली आज बाट ७० वर्ष पूरा भए का हुन् ।
अने’कौँ हण्डर लाई पनि सरल रुप’मा सामना गर्ने ओली’को जीवन’मा स्वास्थ्य त्यति अनु’कुल नभए पनि सक्रीय राजनीति मा निरन्तर लागी परिरह ने नेता का रुपमा परि’चित छन् ।
केपी ओली बिस २०११ साल’मा तेह्रथुम जिल्ला’को आठ’राई तत्का’लीन इवा गा.बि.स. सिम्ले’मा जन्मिए’का थिए ।
तर पछि उन को परि’वार झापा बसाइ सरे’को थियो । उन’को आमा के’पी सानै छँदा बिते’की थिइन् । उन’लाई बुबा मोहन प्रसद ओली ले हुर्काए’का थिए ।
दुई पटक सम्म किड्नी प्रत्या’रोपण गरे’का ओली’ले नेपाली राजनीति’मा हक्की र अडिक स्वभाव’का नेताको छवी बनाएका छन् ।
ठट्यौ’ली र उखान टुक्का’ले बिपक्षीका लाई क’टाक्ष गर्ने उन’को अभि’व्यक्ति र भाषण’को प्रभाव’ले गैर एमाले कार्य कर्ता हरुले पनि उन लाई मन पराउने गर्द छन् ।
आफू प्रधान मन्त्री भएको बेला २ वर्ष अ’गाडि उनले आ’फ्नो जन्म दिन तेह्रथुम को आठ’राई पुगेर मनाए’का थिए । तर उन को बर्थ डेमा नेपाल को नक्सा’को केक ब’नाएर काटेको र ५ वटा हेलि’कप्टर चार्टर्ड गरे’को भन्दै आलो’चित भएका थिए ।
त्यस’यता उनले आ’फ्नो जन्म’दिन सामान्य रुप’ममै म’नाउदै आए’का छन् । गत’साल उनले बालको’टमै सामा’न्य रुपमा म’नाए । उनका बुबा हाल झापा’मा रहँदै आए’का छन् ।
२०७९ बैशाख १९, सोमबार प्रकाशित0Minutes 8302 Views